Neoprene Protector ho an'ny fitaterana HomePod | Avy amin'ny mac aho
Enina andro aho tsy hanana ilay HomePod. Androany dia nandefa ahy ny mailaka fanamafisana momba ny fandefasana HomePod manao akanjo fotsy ary nanomboka ny fikarohako ny fiarovana izany aho. Mazava fa rehefa mividy HomePod isika dia tsy ny hanana azy io ao anaty mpiaro ary marina izany. Ilay mpiaro tadiaviko dia satria manana eritreritra ny hamindra azy io aho ary rehefa miala ao an-trano aho dia tsy tiako ilay harato lamba manodidina azy hanimba na handoto.
Ilay mpiaro izay hasehoko anao ary efa nandidy aho, dia mpiaro iray izay mifanentana tanteraka amin'ilay mpandahateny ary vita amin'ny neoprene mainty. Tsy dia zava-dehibe amiko ny loko, na dia fotsy aza ny mpandahateny ahy satria hitako tsotra izao ho an'ny fitaterana izany.
Efa naka mpanamboatra fitaovana fanampiny izy io hanombohana manamboatra zavatra mahatonga ny HomePod ho voaro tsara. Ireo ampahany roa azo arovana izy ireo dia ny vatan'ny HomePod tenany sy ny efijery ambony.
Amin'ity tranga ity, araka ny hitanao amin'ny sary mifatotra, ny mpiaro ny neoprene dia manana endrika silindrisy toy ny HomePod ary misy ampahany roa, ny ampahany vita amin'ny varingarina izay mamela ny tariby ety ivelany sy ny boribory fototra nametrahana ilay fitaovana.
Ny fahafantarana fa amin'ny fanaka sasany noho ny hovitrovitra dia afaka mamela marika ny HomePod, ity karazana pad ity dia ho fototra tsy hitrangan'izany. Ny vidin'ity mpiaro ity dia 10,64 euros y afaka mianatra bebe kokoa momba izany ianao amin'ny rohy manaraka.
Afaka herinandro dia holazaiko aminao izay rehetra misy ifandraisany amin'ny fananganana an'io fahagaga kely io. Amin'izao aloha dia tsy maintsy miandry ny HomePod vao tonga aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Mpiaro ny neoprene amin'ny fitaterana ny HomePod